फेब्रुअरी 12, 2019 – 2माछा
घर / फेब्रुअरी 12, 2019
उत्पत्ति 1: 20- 2: 4
1:20 त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, "पानी एक जीवित प्राण जनावरहरूलाई उत्पादन गरौं, र उडान प्राणीहरू पृथ्वी माथि, स्वर्गको आकाश मुनि। "
1:21 र परमेश्वरले ठूलो समुद्र प्राणीहरू सृष्टि, र पानी उत्पादन गर्ने सार्न एक जीवित प्राण र क्षमता संग सबै, आफ्नो प्रजाति अनुसार, र सबै उडान प्राणीहरू, आफ्नो प्रकारको अनुसार. र परमेश्वरको यो राम्रो थियो देखे.
1:22 अनि उहाँले तिनीहरूलाई आशिष्, यसो: "वृद्धि र गुणन, र समुद्रको पानी भर्न. र गर्छन् चराहरूले देशमा माथि गुणन गर्न। "
1:23 र यो साँझ र बिहान भयो, पाँचौ दिन.
1:24 भगवान पनि भन्नुभयो, "देशमा उत्पादन आफ्नो प्रकारको बस्ने प्राण गरौं: गाई, र जनावर, पृथ्वीको र जङ्गली जनावर, आफ्नो प्रजाति अनुसार। "अनि त यो भयो.
1:25 र परमेश्वरको आफ्नो प्रजाति अनुसार पृथ्वीको जङ्गली जनावर बनेको, र गाई, र देशमा हरेक पशु, आफ्नो तरिका अनुसार. र परमेश्वरको यो राम्रो थियो देखे.
1:26 अनि उहाँले भन्नुभयो: "हाम्रो छवि र स्वरूपमा गर्न मानिस बनाउन गरौं. र उसलाई समुद्र को माछा शासन गरौं, र हावा को उडान प्राणीहरू, र जङ्गली जनावर, र सम्पूर्ण पृथ्वी, पृथ्वीमा उत्प्रेरित गर्छ कि हरेक पशु र। "
1:27 र परमेश्वरले आफ्नै छविमा मानिस सिर्जना; परमेश्वरको छवि उहाँले उसलाई सिर्जना; पुरुष र महिला, उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि.
1:28 र परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीर्वाद, र, उहाँले भन्नुभयो, "वृद्धि र गुणन, र पृथ्वी भर्न, र यो subdue, र समुद्र को माछा भन्दा डोमिनियन छ, र हावा को उडान प्राणीहरू, र पृथ्वीमा उत्प्रेरित गर्छ कि हरेक जीवित प्राणीहरूको भन्दा। "
1:29 र परमेश्वरले यसो भन्नुभयो: "हेर, म पृथ्वीमा हरेक बीउ-असर बोट दिनुभएको छ, र सबै रूखहरू कि आफ्नै प्रकारको रोप्न क्षमता आफूलाई मा छ, तपाईं को लागि खाना हुन,
1:30 र देशमा सबै जनावरहरू लागि, र हावा सबै उडान कुराहरू लागि, र पृथ्वीमा र जो उत्प्रेरित गर्छ कि सबै कुराको लागि त्यहाँ एक जीवित आत्मा हो, तिनीहरूले यी हुन सक्छ भनेर जो खान्छन् गर्न। "अनि त यो भयो.
1:31 र परमेश्वरको उहाँले बनाएको भनेर सबै देखे. र तिनीहरूले धेरै राम्रो थियो. र यो साँझ र बिहान भयो, छैटौं दिन.
2:1 र त आकाश र पृथ्वी पूरा थिए, आफ्नो सबै सिंगार संग.
2:2 र सातौं दिन, परमेश्वरले आफ्नो काम पूरा, जसमा उनले बनाएको. र सातौं दिन उसले आफ्नो सबै काम बाट विश्राम, जो उहाँले पूरा गरेका थिए.
2:3 र उहाँले सातौं दिन आशीर्वाद र यो पवित्र. यसलाई मा लागि, उहाँले आफ्ना सबै कामबाट भएनन् थियो: जसद्वारा परमेश्वर उहाँले गर्नुपर्छ जो सिर्जना काम.
2:4 यी स्वर्ग र पृथ्वीको पुस्तामा छन्, जब तिनीहरूले सिर्जना, दिन मा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु गर्दा,
मार्क 7: 1- 13
7:2 And when they had seen certain ones from his disciples eating bread with common hands, छ, with unwashed hands, they disparaged them.
7:6 तर प्रतिक्रिया, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “So well did Isaiah prophesy about you hypocrites, यो लिखित गरिएको छ जस्तै: ‘This people honors me with their lips, but their heart is far from me.
7:9 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “You effectively nullify the precept of God, so that you may observe your own tradition.
7:10 For Moses said: ‘Honor your father and your mother,'र, ‘Whoever will have cursed father or mother, let him dieadeath.’
7:11 But you say, ‘Ifaman will have said to his father or mother: Korban, (which isagift) whatever is from me will be to your benefit,'